Balkans: Chii chaungaone mune imwe yenzvimbo dzisingazivikanwe pasi rose | Absolut Kufamba
Balkans: Chii chaungaone mune imwe yenzvimbo dzisingazivikanwe pasi rose
Alberto Makumbo | | Croacia, Greece
Wakakomberedzwa ne Adriatic, Ionia, Aegean, Marmara uye Nyanza Nhema, iyo Balkan Peninsula inokoshesa yakapfuura nhoroondo, hondo uye tsika iri kubuda nhasi munzvimbo yenganano, yakanakira kurasika munzvimbo dzisina vanhu. Kuti ushande semufananidzo wekutanga wenzira yeramangwana, tinokutungamira kuburikidza ne nzvimbo zhinji dzemashiripiti dzekushanyira muBalkan.
1 Plitvice Lakes National Park (Croatia)
2 Mostar Bridge (Bosnia neHerzegovina)
3 Gungwa Bled (Slovenia)
5 Ohrid (Masedhonia)
6 Tirana (Albania)
7 Acropolis (Girisi)
8 Dubrovnik (Croatia)
9 Buzludhza (Bulgaria)
Inofungidzirwa imwe yeiyo mapaki akanaka kwazvo epasireseYakakodzera sequel kune iyo Avatar yemuvhi, Plitvice inopenya seinofanirwa pane chero kushanya kunyika yeCroatia. Seti ye 30 zviuru mahekita macerated nemasango, makomo uye kunyangwe Makungwa gumi nematanhatu akaumbwa nerwizi Korana huwandu hwayo hunotsvedza pakati pemiti yemipaini nemunzira, kupemberera hunhu izvo pano zvinowana rakasiyana dhizaini
Mostar Bridge (Bosnia neHerzegovina)
Senge nyaya, iyo inozivikanwa zvakare seIkare Bridge mune iro guta reHerzegovinian reMostar ndeimwe yeinonyanya kufadza pasirese. Mostar Old Quarter Extension, yakasarudzwa Nhaka yehupenyu neasco muna 2005, zambuko akashanda sechinhu nexus pamusoro Rwizi rweNeretva pakati penzvimbo mbiri dzeguta, iri kuvakwa muzana ramakore rechiXNUMX kudzamara yasvika chinzvimbo chechimiro chetsika panguva yeOttoman yenyika. A classic yeBalkans.
Gungwa Bled (Slovenia)
Yakaumbwa muna 1991 mushure mekuparadzaniswa kwayo neYugosvia, nyika yeSlovenia nhasi inopenya seimwe yeiyo ecotourism kunzvimbo inonyanya kuzivikanwa muEurope. Mubatanidzwa wemaguta ekare (Ljubljana), migwagwa kuburikidza neJulian Alps nenzvimbo dzakakodzera nyaya neHama Grimm, pakati payo, pasina mubvunzo, Lake Bled inomira. Nzvimbo yemvura ine chitsuwa cheBled panzvimbo yayo, inotsanangurwa nekuvapo kweiyo Chechi yaMaria, mune baroque dhizaini uye yakatungamirwa nematanho makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pakatenderedzwa mutambo Akabuda Mazuva uye Bled Husiku, iyo inopembererwa muna Chikunguru uye inoratidzirwa nemakenduru zviuru gumi nezvishanu akaumbwa mumazai emazai ayo anoyangarara mhiri kwegungwa. Mhemberero iyo, maererano nerunyerekupe, ingadai yakakurudzira chimwe chiitiko kubva kuDisney bhaisikopo Tangled.
Yakafukidzwa nemakomo kwechikamu chikuru chekuwedzera kwayo, Montenegro inowana mumwe wevamiriri vayo vakanaka muDurmitor National Park. Yakanaka kupinda iyo Dinaric Alps, iyo paka iseti yemakungwa, makomo nemasango emapaini akayambuka neRwizi Tara, yakanakira kudzidzira rafting, kuwedzera kune seti yemazaya emapako pakati ayo ane mukurumbira Ice bako, iyo inoburitsa muromo wepakati pechando icho vashoma vanotsunga kupinda. Kwakachena kushambadzira muBalkans.
Inowanikwa pamahombekombe e nyanza hombe yakagovaniswa neAlbania yakavakidzana uye yakasarudzwa Nhaka Yenyika naUNESCO, Ohrid ndeimwe yeiyo nzvimbo dzine mukurumbira muMasedhonia. Guta rizere nenhoroondo inotsanangurwa nenzvimbo senge Old Bazaar, nzvimbo yebhizinesi uye zvitoro; wekare weChina Muti, pakati peKrushevska Republika square; kana risingadzivisike Bieja Guta rakavezwa mune dombo umo kuvapo kwe Chechi yeSan Juan Kaneo, yakatarisana nedziva uko, mukati memwedzi yezhizha, vashanyi uye veko havazeze kurara pasi kuzuva.
Guta guru reAlbania ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa kana zvasvika pakupinda munyika ino yakasarudzika yeBalkan. Yakakomberedzwa nemakomo, mabani uye Gungwa reAdriatic, Tirana inotenderera Skanderberg Square, izere nemagadheni uye zvivakwa zvehutungamiriri zveguta, kuwedzera kune zvimwe zvivakwa zvakaita se Et'hem Bey Mosque, musiyano wakachena, kana Pyramid yeTirana, parizvino inzvimbo yemusangano ine dhizaini inonyanya kuzivikanwa. Guta rakasarudzika rine nzira yakanakisa yekuona nenzira yepanoramic iri kuburikidza tambo yemota tambo kumusoro kweGomo Dajt.
Kunyangwe isu tisingazvibatanidze zvakananga sechikamu cheBalkan, chokwadi ndechekuti nyika yechiGreek inofungidzirwa iriwo kune ino nhoroondo peninsula. Nzvimbo yezvitsuwa zvayo zvakakurumbira zveGreek, Girisi inowana muAcropolis yeAthens, guta rayo guru, chiratidzo chikuru chenhaka yayo. Iyo yekare "Upper Town" nhasi inzvimbo inonakidza inovhenekera apo iyo Parthenon, inozivikanwawo seTemberi yaAthena, Inokwezva maziso ese pamwe nekukomberedzwa nezvimwe zviyeuchidzo zvakaita seTheatre yeDionysus, inzvimbo iyo Sophocles akashandisa kutaura kwezviitiko kanopfuura kamwe.
Kushanya, hongu. Asi chero munhu anogona kuramba nzvimbo ine mukurumbira munyika yeCroatia. Guta rine dzimba dzvuku dzakatarisana neAdriatic uye rakakomberedzwa nemadziro makuru ayo anoumba imwe yeiyo dzinonakidza nzvimbo medieval nzvimbo muEurope. Zvikuru zvekuti chikamu chekudaidzira kwako ikozvino chiri pamusoro pechimiro chako se kutora nzvimbo yekutora yakawanda yeMutambo weZigaro episheni uye mavhidhiyo kubva kune yazvino Star Wars trilogy. Cinematic tints yeguta rinoyananisa mushanyi nesimba rakakura reCroatia uye, wadii, zvakare mamwe emahombekombe emahombekombe akakomberedza guta achikoka kutora dhibhu mushure meiyo nhoroondo nzira.
Iyo inozivikanwawo seye ChiBulgaria UFOBuzludhza chimiro chakashata chakafukidzwa nemhute iyo yaishandira senzvimbo yemafaro evakuru vemakomunisiti vane mukurumbira muBulgaria. Nzvimbo inokodzera maX-Files akavakirwa pamusoro pegomo reBuzludzha iro risingabvumirwe kupinda risingabvisi kushanya kwenzvimbo dzakapoterera apo, kumusoro uko, chokwadi chekuti vatorwa vakasvika kumaBalkan pane imwe nguva chinozovimbika.
Sezvauri kuona, balkans ivo vanogadzira mepu yezvinokwezva pakati pazvo kuti vawane maguta anoyevedza, zviroto zvepaki dzenyika, zviyeuchidzo zvengano uye kunyangwe dziva rakakodzera firimu reDisney rehupenyu.
Wakamboshanyira ipi neipi yenzvimbo idzi muBalkans?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Balkans: Chii chaungaone mune imwe yenzvimbo dzisingazivikanwe pasi rose
Tsvaga yekudyira neYellow Mapeji
Chii chaunofanira kutsvaga kuti urende karavhani?